मेस्सीको जादु, जुत्ता बिना मोजाका भरमा गोल ! | suryakhabar.com
Home खेलकुद मेस्सीको जादु, जुत्ता बिना मोजाका भरमा गोल !
on: ९ पुष २०७४, आईतवार १३:३८ In: खेलकुदTags: जुत्ता बिना मोजाका भरमा गोल !, मेस्सीको जादुNo Comments
काठमाण्डौ । यो सिजनको पहिलो एल क्लासिको शनिबार सकिए पनि त्यसको रंग भने अझै केही समय रहनेछ । यो सिजन लिगमा राम्रो प्रदर्शन गरेको बार्सिलोनाले आफ्नो अपराजित यात्रा २५ खेलमा पुर्‍याउने क्रममा रियल मड्रिडलाई उसकै मैदानमा ३–० ले हरायो ।
यी सबै कुराले शनिबारको एल क्लासिको चर्चामा छ । यो खेलको अर्को चर्चित विषय हो, खेलको इन्जुरी समयमा मेस्सीले भिडाललाई गोलका लागि गरेको सहयोग । पेनाल्टीमा आफूले गोल गरेका मेस्सीले इन्जुरी समयमा भिडाललाई गोलका लागि सुन्दर सहयोग गरे । तर त्यसबेला मेस्सीको एउटा खुट्टामा बुट ९जुत्ता० थिएन, मोजा मात्रै थियो । जुत्ता बिना पनि मेस्सीले गोलका लागि सुन्दर सहयोग गरेर सबैलाई चकित पारे ।
Tags: जुत्ता बिना मोजाका भरमा गोल !मेस्सीको जादु
साना दलका लागि झलनाथ खनालले गरे खुसीको कुरा
९ पुष २०७४, आईतवार १३:३८